China mpanamboatra marika lamba akanjo, namboarina namboarina Quotation - Angel Garment Accessories Co., Ltd.
Home >Products >Marika fanamiana
Marika fanontana akanjo
marika fanontana na tag ary marika lehibe, marika habe, marika fanasan-damba, dia iray amin'ireo fanao amin'ny pirinty, fitaovana ao anatin'izany ny kofehy, kasety landihazo, kofehy, lamba miloko, lamba landihazo, lamba tsy tenona, sns., ny vokatra matetika no ampiasaina ao fitafiana, kiraro, satroka, atin'akanjo, be, ary kojakoja isan'andro na lamba hafa, ny tanjona dia ny hampahafantaran'ny mpanjifa ny marika, ny habeny, ny akora ary ny fenitry ny rano fanasana.
Labels sticker vita amin'ny akanjo
Ny marika fametahana tena dia manana tombony tsy misy borosy lakaoly, tsy misy paty, tsy misy mandroboka rano, tsy misy fandotoana, mamonjy fotoana fanaovana labeling sns sns miaraka amin'ny marika nentim-paharazana. Izy io dia manana rindrambaiko isan-karazany, mety sy haingana. Ny fametahana tena dia karazana fitaovana, antsoina koa hoe fitaovana fametahana pirinty tena. Izy io dia karazana fitaovana mitambatra miaraka amin'ny taratasy, sarimihetsika na fitaovana manokana hafa toy ny lamba, adhesive ao an-damosina ary ny taratasy fiarovana silicon toy ny taratasy fototra.
Marika fikarakarana akanjo
ny tena atiny amin'ny labozia fanasana lamba dia ny masontsivana fitafiana, manondro ny lamba, ny firafitry ny fitaovana ary ny fomba fitazonana ireo akanjo. Izy io dia karazana marika vita amin'ny tenona. Izy io dia tenona amin'ny milina marika vita amin'ny tenona amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny kofehy vita amin'ny kofehy sy ny fampiasana kofehy tenona mba hanehoana ireo teny, sary, litera, tarehimarika, famantarana telo-habe ary fitambarana loko.
Famaritana haben'ny akanjo
habe marika dia iray amin'ny indostrian'ny fitafiana ilaina fitaovana, dia mifototra amin'ny fototra haben'ny vatan'olombelona, ​​araka ny fomba samy hafa, miaraka amin'ny habetsaky malalaka malalaka. Raha vantany vao voafaritra ny haben'ny akanjo, dia ny fototry ny akanjo famokarana.
Famaritana barcode fiakanjoana
Ny mari-kaody barcode, araka ny anarany, dia ny marika izay manonta na manonta ny kaody barcode. Ny ankamaroan'ny fampiharana dia mitaky ny isan'ny kaody bara mba tsy manam-paharoa. Rehefa dinihina ny vidiny sy ny fahafaha-manaony, ny mari-pamantarana bara dia matetika no navoakan'ny mpanonta barcode.
Ny marika amin'ny akanjo dia marika mihantona amin'ny karazan'akanjo rehetra, ao anatin'izany ny akanjon'ny fitafiana, fitandremana fanasan-damba ary fampahalalana hafa.